7 Askari Yugaandhays ah oo Sh/hoose lagu dilay iyo Guddoomiyaha Awdheegle oo qarax ka badbaaday.
Thursday September 05, 2019 - 14:25:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya qaraxyo saacadihii lasoo dhaafay deegaanno katirsan gobolka Shabeellaha Hoose lagula beegsaday ciidamada dowladda Federaalka iyo kuwa AMISOM.
Qaraxa koowaad ayaa maanta barqadii ciidamo katirsan AMISOM gaar ahaan kuwa Uganda lagula beegsaday wadada isku xirta deegaannada Danoow iyo Golweyn oo dhammaantood katirsan Sh/Hoose.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in qaraxu uu sababay dhimashada ugu yaraan 3 askari Yugaandhays ah iyo dhaawac gaaray tiro kale, ciidamada qaraxu haleelay ayaa saaka ka baxay deegaanka Danoow waxayna kusii jeedeen dhanka deegaanka Golweyn.
Daqiiqado kadib markii uu qaraxa koowaad dhacay ayuu qarax 2aad qabsaday ciidamada Uganda markii ay gaareen deegaanka Golweyn oo kaabiga ku haya degmada Buula Mareer, waxaa la sheegayaa in qaraxa labaad uu ka khasaara badanyahay qaraxii koowaad ee maanta duhurkii dhacay, isku gayn khasaaraha dhimasho ee ciidamada Uganda kasoo gaaray qaraxyadii maanta waa 7 askari.
Dhinaca kale guddoomiyaha degmada Awdheegle ugu magacaaban dowladda Federaalka ayaa si dirqi ah uga badbaaday qarax lala damacsanaa in lagu dilo, qaraxa ayaa la sheegay in uu gaystay khasaara dhimasho iyo dhaawac isugu jira.
Sidoo kale ciidamo katirsan DF-ka ayaa ku waxyeeloobay qarax aad u xooggan oo xalay lagula beegsaday xaafadda Oobaale ee gudaha magaalada Marka xarunta Sh/Hoose.
Xarakada Al Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda dhammaan qaraxyadii iyo weeraradii saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanno iyo degmooyin katirsan Sh/Hoose oo ah gobol uu ka socdo loollan aad u xooggan.